जीवन संघर्षको उत्तार चढाब हो : भुजेल | bethanchokkhabar.com
जीवन संघर्षको उत्तार चढाब हो : भुजेल
मंगलबार, आश्विन ०९, २०७५ | ३:५८:२८ |
(नवराज ढुगाना) धुलिखेल । जातिय विभेद, वर्गीय उत्पीडन,अन्याय,अत्याचार, अवसरवाद र सामन्तवादको बिरोधमा सधै नेतृत्वमा रहि डटेर लाग्ने र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका मिजासिला, मिहिनेती, सामाजिक सेवा गर्ने स्वभावका रामगोपाल भुजेल असाधारण क्षमताका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
निजको जन्म बुबा अमर बहादुर भुजेल र आमा दिलमाया भुजेलको कोखबाट कान्छो सन्तानको रुपमा २०४०/११/१४ गते काभ्रे जिल्लाको वाल्टिङ गाबिस हालको रोशी गाउपालिका १० भागेटारमा भएको थियो । स्थानीय पन्चकन्या मा बि मा ५ सम्मको अध्यन गर्दै गर्दा आफ्नो घरपरिवार बसाइँ सरि देवभुमी बालुवा हालको पाँचखाल नगरपालिका १२ बालुवामा २०५२ सालमा आउनु भएको थियो । अध्यनकै क्रममा बालुवाको आजाद मा वि बाट २०५७ सालमा एसएलसी दिएका भुजेल तत्कालीन माओवादीले चलाएको १० वर्षको ससस्त्र जनयुद्द ताका २०५५ सालमा पार्टीको भात्तृत्व संगठन अखिल क्रान्तिकारीको इकाई सचिव, २०५६ मा जिल्ला सदस्य भएका थिए ।
पत्रकारितामा पनि हात हाल्नु भएका भुजेल २०५८/५९ मा जिल्लाबाट प्रकाशित रास्ट्रचक्र साप्ताहिकमा आवद्ध भएका थिए । मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिनु भएका भुजेल पत्रकारिताबाट हात धुदै २०५९ बाट काठमाडौंको कुनै एक रिसोर्टमा काम गर्न थाले । १० वर्षको सानै उमेरमा खार्पाचोकमा अग्नि सापकोटा र सिपि गजुरेलको प्रशिक्षण पाएका भुजेल रिसोर्टमा चुप लागेर बस्नै सकेनन। त्यतिखेर रिसोर्टमा दिने तलब, हुने गरेका ज्यादतीको बिरोध गर्नका लागि २०६२/६३ मा होटेल रेस्टुराँ मजदुर संघका इकाई सचिव बने। त्यसपछी प्रत्येक रेस्टुराँ होटेलहरुमा ग्राकहरुलाइ मजदुरले सेवा गरे बापत सेवा शुल्क लगाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका होटेल मजदुरहरुले अन्तत त्यो माग पूरा गरेरै छाडे ।
२०६४ मा होटेल मजदुरको ललितपुर जिल्ला सदस्य भएका भुजेल २०६८ को पोखरा महाधिवेशनले केन्द्रिय सदस्य बन्नु भयो भने पार्टीको पाँचखाल नगर सचिव पनि हुनु भ्याउनु भयो । विभिन्न संघ सस्थामा आवद्द भइ सेवागर्दै आउनु भएका भुजेल हाल भुजेल समाज सेवा समितिको केन्द्रिय सचीव, नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघको केन्द्रिय सचिवालय सदस्य तथा काभ्रेको जिल्ला अध्यक्ष र युवा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी उनै रामगोपाल भुजेलसँग वेथानचोक खवर डटकम सहकर्मी नवराज ढुगानाले गर्नुभएको भलाकुसारी -:
0 तपाई एक रेष्टुरेन्ट व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । यस हिसाबले पर्यटकिय नगरी धुलिखेलको रेष्टुरेन्टहरुको अवस्था के कस्तो छ ? वताईदिनुस न ?
– पर्यटकीय नगरी धुलिखेल अहिले नाम मात्रको छ । ठूल्ठूला रिसोर्टको लागि ठिकै देखिन्छ तर साना साना रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुको लागि अलि गाह्रो छ । धुलिखेल घुम्न आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन एकदमै घटेको छ । यस बारेमा स्थानीय सरकारले सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
0 अफ सिजन भएर हो की साच्चै धुलिखेल घुम्ने पर्यटकहरु कम नै भएका हुन त ? पर्यटक आकर्शित गर्ने केही कार्यक्रमहरु छन त ?
– अफ सिजन त हुँदै होइन । वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउनका लागि नागरिक समाज धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय सरकारले नया नया कुराको स्थापना गर्दै नयाँ नयाँ कुराले आकर्षित गर्न सक्यो भने होला नत्र यहि पुरानै तरिकाले चाहिँ हुने वाला केही छैन ।
0 तपाई होटल मजदुर सघको केन्दिंय सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । होटल मजदुरहरुको सेवासुविधाको वारेमा के कति गर्नुभएको छ ? र मजदुरहरु तपाईहरुको सेवासुविधावाट कत्तिको सन्तुष्ट भएको पाउनुभएको छ ?
– हेर्नुस् होटेल मजदुरले जतिको सुबिधा र अधिकार अरु मजदुरले पाएको छैन होला भन्ने लाग्छ । तै पनि यो १० वर्षको महान जनयुद्द र १९ दिने ऐतिहासिक आन्दोलनले एउटा ठुलो सफलता पाएको छ । त्यो सुबिधा भनेकै सर्भिस गरे बापत ग्राकहरुबाट पाउने १०% शुल्क नै हो । त्यसै कारण मजदुरले हामी र हाम्रो संगठन माथी पुर्ण विस्वास गरेको छ ।
0 नया कानुन अनुसार मजदुरहरुलाई तोकीएको ज्याला तोकीए वमोजिम बैङ्क खातामा भुक्तानी भएको छ, छैन मजदुरहरुवाट के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
– लगभग त्यो काभ्रेमा हेर्ने हो भने प्राय होटेलमा लागू गरेको छ । एदाकता छिटफुट होटेलहरुले गरेको छैन त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो हामी वार्तामा बसेर टुंगोमा पुर्याउछौ । मजदुरहरु त्यसमा खुशी नै देखिन्छ ।
0 मजदुरहरु सगै ग्राहकहरुको पनि सन्तुष्टिको लागी केही प्रयासहरु भएका छन त ?
– विषेश गरि भन्ने हो भने ग्राकलाइ सन्तुष्टि दिने भनेको आन्नदसग बस्ने बाँस, मिठो खाना, राम्रो सरसफाइ र राम्रो सर्भिस त हो नि होइन र हाहाहा…..
0 भुजेल समाज सेवा समितिको वारेमा केही वताईदिनुस न ?
– भुजेल समाज सेवा समिति भनेको नितान्त समाजको सेवा गर्ने सस्था हो । यो सस्थाको स्थापना बि स २०५२ सालमा सुनसरीको धरानमा भएको हो । यो लगभग ३६ वटा जिल्लामा बिस्तार भएको छ । यसको भात्रु संगठन पनि रहेको छ । महिला, बिद्यार्थी, युवा, चलचित्र कर्मी संघ रहेको छ । साथै प्रवास समाज कतार, युएई, कोरिया पनि रहेको छ ।
0 यी सबै कुरामा सक्रिय रहनको लागी समय कसरी मिलाउनु हुन्छ त ?
– त्यो त इच्छा शक्ति र लगनशीलता हो । चाहानु मात्र पर्छ अटोमेटिक समय मिल्दै जान्छ ।
0 तपाईको विचारमा जीवन के हो ?
– मेरो बिचारमा जीवन संघर्षको उत्तारचढाब हो ।
0 प्रेम के हो ?
प्रेम एकअर्का प्रतिको आत्मीयता हो ।
0 अन्त्यमा मैले भन्न छूटाएको अनी हजुरलाई भन्न मन लागेको केहि कुरा छ त ?
– सर्वप्रथम त तपाइ र तपाइको यो बेथानचोक खबर डटकमलाइ धन्यवाद दिन चाहान्छु । मेरो मनमा लागेको कुराहरु सन्चार मिडियामा राख्न दिनु भएकोमा । केही छुटेको जस्तो त लाग्दैन तै पनि सवै मानिसहरुलाई आफू असल बनि अरुलाइ नकारात्मक सोचले नहेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद